Yeremia 15 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yehowa rensesa n’atemmu (1-9)
Yeremia kaa ne haw (10)
Yehowa maa no mmuae (11-14)
Yeremia mpaebɔ (15-18)
Odii Onyankopɔn nsɛm maa n’ani gyei (16)
Yehowa hyɛɛ Yeremia den (19-21)
15 Na Yehowa ka kyerɛɛ me sɛ: “Sɛ Mose ne Samuel mpo begyina m’anim a,+ merenhu ɔman yi mmɔbɔ.* Pam wɔn fi m’anim. Ma wɔnkɔ. 2 Na sɛ wobisa wo sɛ, ‘Ɛhe na yɛnkɔ?’ a, ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni: “Nea ɔfata owuyare no, ɔnkɔ mma owuyare nkum no! Nea ɔfata sekan no, ɔnkɔ mma sekan nkum no!+ Nea ɔfata ɔkɔm no, ɔnkɔ mma ɔkɔm nkum no! Na nea ɔfata sɛ wɔkyere no kɔ no, wɔnkyere no nkɔ!”’+ 3 “‘Mmusu anan* na mede bɛba wɔn so,’+ Yehowa asɛm ni, ‘sekan a ebekunkum wɔn, nkraman a wɔbɛtwe wɔn ase akɔ, ne ewim nnomaa ne asaase so mmoa a wobedi wɔn nam na wɔasɛe wɔn.+ 4 Na nea Yuda hene Manase, Hesekia ba no yɛe wɔ Yerusalem nti,+ mɛma wɔadan biribi a ɛyɛ hu ama asaase so ahenni nyinaa.+ 5 Hena na obehu wo mmɔbɔ, O Yerusalem?Hena na ɔbɛkyekye wo werɛ?Na hena na obegyina abisa sɛnea wo ho te?’ 6 ‘Woafi m’akyi,’ Yehowa asɛm ni.+ ‘Wokɔ so ara dan w’akyi kyerɛ me.*+ Enti mɛteɛ me nsa wɔ wo so na masɛe wo.+ Mahu wo mmɔbɔ ara, afei de mabrɛ. 7 Mehuw* wɔn so wɔ asaase no apon ano sɛnea wohuw awi* so no. Mekunkum wɔn mma.+ Mɛsɛe me man,Efisɛ wɔmpɛ sɛ wɔsesa wɔn akwan.+ 8 Wɔn akunafo bɛdɔɔso wɔ m’anim asen mpoano anwea. Mɛma ɔsɛefo aba wɔn so awia ketee, na ɔbɛba abaatan ne mmerante so. Mede ahoyeraw ne ehu bɛba wɔn so mpofirim. 9 Ɔbea a wawo mma baason no ayɛ bɛtɛɛ;N’ahome* retew. Ade nnya nsae, nanso n’awia akɔtɔ;Ɛde animguase ne fɛre aba.’* ‘Na wɔn mu kakra a aka no,Mede wɔn bɛma sekan wɔ wɔn atamfo anim,’ Yehowa na waka.”+ 10 O me maame, adɛn koraa na wowoo me?+Mayɛ onipa a asaase no nyinaa ne me reham na wɔne me retwe manso. Obiara mmɛbɔɔ me hɔ bosea, na me nso minkogyee obiara hɔ bosea;Nanso obiara redome me. 11 Yehowa kae sɛ: “Sɛnea ɛte biara, medi aboa wo;Sɛnea ɛte biara, metwitwa agye wo wɔ ɔhaw bere mu,Na megye wo afi atamfo nsam wɔ amanehunu bere mu. 12 Obi betumi abubu dade mu asinasin anaa?Obetumi abubu dade a efi atifi fam, ne kɔbere mu asinasin anaa? 13 Mɛma nkurɔfo afom wo ho nneɛma ne w’agyapade;+Mede bɛma wɔn kwa, wo bɔne nyinaa a woayɛ wɔ wo nsaase nyinaa so nti. 14 Mede bɛma w’atamfoMa wɔde akɔ asaase a wunnim so so.+ Efisɛ m’abufuw asɔ gya,Na ɛredɛw gu mo so.”+ 15 O Yehowa, wo ara wunim.Kae me, na twa w’ani bɛhwɛ me. Tua wɔn a wɔretan m’ani no ka ma me.+ Mma menyera* esiane sɛ wo bo mfuw ntɛm nti. Hu sɛ wo nti na animguase yi aba me so.+ 16 Minyaa wo nsɛm, na midii;+Na w’asɛm ma midii ahurusi nyaa anigye wɔ me koma mu,Efisɛ wo din da me so, O Yehowa, asafo Nyankopɔn. 17 Wɔn a wɔregye wɔn ani no, ɛnyɛ ade a metena wɔn mu di ahurusi.+ Wo nsa a ɛwɔ me so nti, me nko ara na mete,Efisɛ wode abufuw ahyɛ me ma.*+ 18 Adɛn nti na ɛyaw a midi no nkɔ da, na m’akuru nni aduru yi? Wɔsa a ɛnsa. Wobɛyɛ sɛ nsuten daadaafoA edi huammɔ ama me anaa? 19 Enti nea Yehowa aka ni: “Sɛ wosan ba a, ɛnde megye wo bio,Na wubegyina m’anim. Sɛ wuyiyi nneɛma a ɛsom bo fi nneɛma hunu mu a,Wobɛyɛ te sɛ me ara m’ano.* Wɔn na wɔbɛsan aba wo nkyɛn,Na ɛnyɛ wo na wobɛsan akɔ wɔn nkyɛn.” 20 “Mɛma woadan kɔbere afasu a wɔabɔ ho ban ama ɔman yi.+ Ko de, wɔne wo bɛko,Nanso wɔrentumi wo.*+Efisɛ midi w’akyi, megye wo, na mayi wo,” Yehowa na waka. 21 “Megye wo afi abɔnefo nsam,Na meyi wo afi atirimɔdenfo nsam.”
^ Anaa “me kra ani rensɔ ɔman yi.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Atemmu ahorow anan.” Nt., “Mmusua anan.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “San ara na woresan w’akyi.”
^ Anaa “Mede nkorata behuw.”
^ Anaa “Ne kra ahome.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “N’awia no ani awu, na afɛre.”
^ Nt., “Mfa me nkɔ.”
^ Anaa “wode atemmusɛm ahyɛ me ma.”
^ Anaa “Wobɛyɛ me kasamafo.”
^ Anaa “wɔrentumi nni wo so nkonim.”